Mid Autum ụbọchị ekele na ngosi si Axnew
Ezigbo All, biko obiọma ga-asian na Axnew Display na China maka Mid-mgbụsị akwụkwọ Festival on 15th (Thursday) na 18 (Sunday), Sep, 2016. Biko, nyere na-ekwurịta okwu a ozi anyị mkpara, ndị ahịa, suppliers na ihe ọ bụla ọzọ dị mkpa ọzọ ma ọ bụrụ na achọrọ. IT, Operation, Finance na ndị ọzọ na depar ...
Axnew enye atumatu capacitive Monitors site 7 inch 32 inch
Axnew enye dị iche iche nha nke atumatu capacitive Monitors site 7 inch, 8 inch, 8.4 anụ ọhịa, 10 nke anụ ọhịa, 10.4 anụ ọhịa, elu TP 21,5 inch, 32 inch, etc. Dị nnọọ ikwunye na USB interface, na-arụ ọrụ ya n'enweghị ihe mgbochi. Dị ka ndị ahịa 'arịrịọ, anyị engineer otu azụlitewo dị iche iche ọkpụrụkpụ nke ...
Industrial aka panel PC
Na ọrụ nke mbadamba pc na-na-mma na mma, ọtụtụ ụlọ ọrụ mmepụta ihe ubi malitere iji ọnụ ala karịa panel PC, na ulo oru aka panel PC ahịa nwekwara agbanweela a ezigbo mgbanwe, ndị mmadụ malitere agbasaghị tụnyere ọdịdị mmadụ na aka-ihuenyo mbadamba kọmputa. Ya mere, ...
The Development of projective-capacitive ihuenyo
Na popularization nke na-emekarị, projective capacitive ihuenyo aghọwo ndị kasị ewu ewu aka ákwà na-eji nwayọọ nwayọọ na-eji dochie resistive ihuenyo dị ka a ahịa akpa oke. Uru nke capacitive ihuenyo: 1. Ọ na-adịghị mfe emetụta site nkọ akpọkwa scratching na yi 2 ....
New website ulo oru Monitors maka AXNEW ụlọ ọrụ
Guzosie Ike na afọ 2009, Axnew ọma ike ogologo okwu mmekọrịta ahịa na a ulo oru ngosi akara gburugburu ụwa. Kwere, anyị mbụ website axnew.com na-ọma mara site anyị niile ahịa. Ugbu a ìgwè anyị na-amalite nke abụọ anyị website: https: // ulo oru-lcdmonitor ...
Rịba ama na nke mwepụ
Ezigbo ma ọ bụ Madam, Biko-asian na anyị factory na-aga ịkwaga a ọhụrụ ụlọ ke Industrial park na mgbe Jan 1, 2015. New adreesị bụ dị ka n'okpuru: 4 Ft, Yinliantong Industrial Park, NO.460 AilianZhangbei, Longgang District , ShenzhenChina. Nọmba ekwentị, Fax nọmba na E-mai ...
Iye Touch arụ ọrụ na mmepe
Infrared ihuenyo mmetụ mepụtara sọrọ na multi-aka atụmatụ gị nnukwu nha ngosi ihuenyo. Ka anyị mara ihe banyere Iye aka ụkpụrụ apụ. Infrared Touch Screen bụ a aka etiti nke a na-emekarị arụnyere n'ihu ngosi ihuenyo. The etiti na-ike na e biri ebi circui ...
AXNEW ngosi ulo oru monitor
AXNEW ngosi na-akọrọ gị ihe banyere ulo oru ileba anya. Olee otú họrọ otu ulo oru monitor? Industrial LCD Monitors nwekwara atụbipụ otu nzube dị ka LCD Monitors maka laptọọpụ. Otú ọ dị, a ezi ulo oru monitor: ga-amalite na-agba ọsọ na aka ike na-arụ ọrụ na gburugburu, ga-arụ ọrụ na ihe ...
8.0 "oghe etiti nyochaa 800 × 600 na aka nhọrọ
AXNEW akwalite elu-visibiliti jupụtara na nkume ngosipụta nke 8.0''800 × 600 (4: 3) format na ka anyị na-egosi gị ma ọ bụrụ na i nwere mmasị na ya. 8.0 '' Ikanam backlight na pụrụ iche imewe si anyị injinia na-eso ụfọdụ ozi na gị. Nke a na-ewu ewu ngwaahịa agụnye ndị ọhụrụ anyị VGA interface ...
Ìhè anyanwụ ogugu ihuenyo mmetụ monitor nke 7 inch na 8 inch na-emeghe etiti ngwọta
site ha na 18-11-22
Ìhè anyanwụ ogugu ihuenyo mmetụ monitor nke 7 inch na 8 inch na-emeghe etiti ngwọta na-pụta, anyị otu ewepụtala dị iche iche iche iche nke nkọwapụta ka dakọtara dị iche iche voltages, gụnyere 5V na 12V. Ndị a ngwọta nwere ike ịbụ maka ọkara n'èzí ngwa, dị ka ndị na-adọba ụgbọala usoro, vend ...
Ewepụghị ture imewe maka aka panel pc
Axnew akwalite ewepụghị ezi imewe 21 inch capacitive panel pc, na zuru HD 1920 × 1080. ụfọdụ ndị ọzọ nha nke 13 inch na 15,6 inch na zuru hd IPS nkọwa na-apụta na-esote ọnwa ole na ole. Mmadụ Bịa ka kpọtụrụ anyị ma ọ bụrụ na i nwere ase.